Logos Library | endrika
United Nations - Fanambarana Iraisam-pirenena Momba Ny Zon'olombelona
ny olona tsirairay. ANDININY FAHA-4
Tsy misy olombelona azo handevozina na hampanompoana. Rarna ny fanandevozana sy ny varotra andevo na inona na inona endrika isehoany. ANDININY FAHA-5 Tsy misy olombelona azo hampijaliana na saziana na hanaovana fitondrana feno hasiahana, tsy mifanaraka na mampihetry ny maha- olona. ANDININY FAHA-
Mitovy ny olon-drehetra eo anatrehan''ny lalna ary samy manan-jo ho arovan''izany lalna izany, indrindra manoloana izay mety ho fanavakavahana na fihantsiana manana endrika fanavakavahana ka mety hanitsakitsaka ity Fanambarana ity. ANDININY FAHA-8
Manan-jo hitory amin''ny Fitsarana misy ao amin''ny taniny ny olona tsirairay raha mahatsapa fa ...